Paunonyanya kurumbidza uye kupemberera hupenyu hwako, ndipo pane hupenyu hwekupemberera. - Oprah Winfrey - Quotes Pedia
Hupenyu chikomborero kwatiri tese. Iyo inoshamisa nzira iyo ine chikamu chayo chekukwira uye pasi. Isu tine zvipo nemufaro wamai wepasi uye nehukama hwatinokudziridza apo tinokura.
Kana iwe ukatarisa-tarisa, iwe uchashamiswa nehuwandu hwezvinhu zvakakura kwazvo kupfuura chero iwe. Isu tiri chete asi chidimbu cheguruva mune zvakasikwa izvi, zvakadaro tinogona kuita zvakawanda. Tinofanira kudaro, tigadzire hupenyu hwedu uye tirarame munzira inobereka kwazvo.
Isu dzimwe nguva tinongopemberera mamwe matanho. Asi kana tikadzidza kukoshesa nekupemberera zvinhu zvidiki muhupenyu kazhinji, saka pamwe tese tichava vakanaka uye vanofara muhupenyu. Tinofanira kudzidza kuona zvakanaka mune vamwe nekurumbidza. Izvi zvinokurudzira vamwe kuti vaenderere mberi nemabasa avo akanaka uye vatore rimwe nhanho kumberi munzira kwayo.
Paunorumbidza uye nekupemberera hupenyu hwako kazhinji, saka unoona mikana yakawanda yaunoda kuyedza. Izvi zvinotitungamira kune zvimwe zviitiko zvinotiumba isu kuti tive vanhu vakuru vevanhu. Saka, tinowana zvimwe zvikonzero uye nemitambo yekupemberera.
Hupenyu hunova hunonakidza. Patinopemberera uye nekurumbidza hupenyu hwedu pachedu, tinoziva kuti takaropafadzwa sei. Zvino ibasa redu kubatsira vamwe vari kushayiwa. Izvi zvinoita kuti hupenyu hwavo huve nani uye nekudaro, zvinoita kuti nzanga yedu ienderere mberi. Kana isu tichigona kukurudzira iyi pfungwa, saka tinogona rarama hupenyu uchifara uye zvine chibereko.
Zvinotyisa Quotes Pa Hupenyu
Pemberera Hupenyu Quotes
Nakidzwa neHupenyu Quotes
Akakurumbira Quotes About Hupenyu
Hupenyu Huru Quotes
Anofara Hupenyu Quotes
Hupenyu Taura Kuti Urarame Na
Chinhu chikuru pane zvese chaungatore kurarama hupenyu hwehope dzako. - Oprah Winfrey Akafanana…